Nagu saabsan - Jiangxi Yoho Technology Co., Ltd.
Tikniyoolajiyadda Jiangxi yoho Co., Ltd. way ka diiwaangashantahay oo la aasaasay
2018! Waxay ku taal isgoyska jiangxi, hubei, anhui iyo hunan gobolada, jiujiang dhaqaale iyo aag horumarin farsamo waa magaalo dhaqan caan ah oo ku taal koonfurta wabiga Yangtze, buur iyo wabi leh taariikh ka badan 2200 sano.And u dhaw buurta lushan ee caanka ah ee Shiinaha, biyaha muujinta jiangda badda, lu yun toddobo gobol oo dariiq wanaagsan ah, tareen xawaare sare leh oo laba dherer leh iyo mid siman, taraafikada ayaa horumaray, goobta juquraafi ahaan wey ka sarreysaa, aad ayey u wanaagsan tahay astaamaha horumarka warshadaha!
Shirkaddu waxay ku hawlan tahay surwaal caadada haweenka, surwaal cillad sanka ah, xafaayad qaangaar ah, surwaal nadiif ah oo banaanka ah, joodariyada, iyo waxyaabaha kale ee fayadhawrka la istcimaalo ee cilmi baarista iyo horumarka, waxsoosaarka iyo iibka. surwaal loogu talagalay caadada dumarka iyo surwaal cillad la'aan, taas oo jabisay fikradda cusub ee daryeelka caadada haweenka ee haweenka ...
Daacadnimo - dhulkii Kun! Qofka sharafta leh wuxuu xambaarsan yahay wanaagga, daacadnimada iyo wanaagu waa aasaaska dadka wanaagsan, nuxurka ruuxda ganacsiga, iyo asaaska aasaasiga u ah jiritaanka guud ee jiritaanka madaxda sare.
Hal-abuurnimo - "ma aha oo kaliya dusha, ma aha buugaagta, kaliya dhabta ah, kaliya tijaabada" waa "hal-ku-dhigga" ruuxiga ganacsatada Yoho. “Hal-abuurnimo” waxay gaadhaa qiimaha shaqaale kasta! Guul laga gaaro sumadda, guusha horumarka ganacsiga! Ku dhiirrigeli horukaca tikniyoolajiyada ganacsiga!
Yoho Technology waa shirkad ku takhasustay cilmi baarista iyo horumarka, wax soo saarka, iibinta iyo adeegga iibka ka dib ee dhallaanka iyo alaabada nadaafadda ee carruurta! Surwaalada nadiifinta bannaanka, xafaayadda dadka waaweyn, surwaal, surwaal cillad la'aan, xafaayadda ilmaha, surwaalka carruurta, surwaalka xayawaanka lagu dhejiyo, joodariyaal caafimaad iyo alaabada kale ee fayadhowrka. Waxay leedahay aqoon isweydaarsi heer sare ah iyo tiro ka mid ah rukumada R&D ee warshadaha.
Iyada oo la adeegsanayo istiraatiijiyadda astaanta, hubinta tayada iyo hal-abuurka soosaarka iyada oo ah tartanka ugu weyn, Yoho Technology ayaa dhistay shabakad iibsi iyo nidaam adeeg oo daboolaya dalka oo dhan. Alaabada ayaa sidoo kale loo dhoofiyaa Mareykanka.
South Korea, India, Brazil, Indonesia, New Zealand, Australia iyo dalal kale iyo gobolada, waxayna ku guuleysteen aaminaada macaamiisha iyo iskaashiga istiraatiijiyadeed ee muddada dheer. Shirkadda waxay muhiimad weyn siisaa Kheyraadka
Wuxuu aasaasay xiriir iskaashi istiraatiiji ah “OEM” shirkado badan oo caan ah oo gudaha iyo dibedda ah. Iyada oo la kaashanayo, wuxuu ilaaliyaa horumarka shirkadeed ee wada-hawlgalayaasha si niyad wanaagsan leh wuxuuna si joogta ah u siiyaa wada-hawlgalayaal tartan leh.
Alaabada hal-abuurka leh waxay si buuxda u muujinayaan mas'uuliyadda iyo waajibaadka adeegga saldhigga wax soo saarka!